चीन Chunmee 8147 कारखाना र निर्माताओं | Yibin चिया
चिनियाँ वर्षा चिया, वर्षा चिया परिष्कृत चुनमी चियाबाट निकाले, चुन्मी चिया श्रृंखलाको १०% भन्दा बढी उत्पादनहरूको लागि लेखांकन। तैयार चिया स्ट्रिपहरू कोमल र कम्प्याक्ट हुन्छन्, हरियो रंग र फ्रुस्टिंगको साथ, ताजा र बाक्लो गन्ध र मीठो स्वाद
जकड़न, सीधा, भौं आकार
भारी मीठो स्वाद, स्फूर्ति
चुनमी हरियो चिया के हो?
चुनमी ग्रीन टी चीनको सब भन्दा उत्पादक चिया हो। योसँग सब भन्दा स्थिर बिक्री बजार छ, र विश्वको सबैभन्दा चिया हो।
"चुनमी" चीनियाँको अर्थ "भौं" हो, त्यसैले यसलाई यसको नाम दिइयो किनकि यसको भौंको आकारको सुख्खा पातहरू।
चुनमी चिया पिउँदा फाइदा:
१. वजन घटाउन सहयोग गर्नुहोस्, पचाउन मद्दत गर्नुहोस्;
२. एंटीसेपसिस र एन्टी-इन्फ्लेमेसन
Blood. रक्त लिपिड र दबाव घटाउनुहोस्।
R. ताजा, तनाव कम विरोधी थकान र आदि
यस चियाको विशेषताहरू उच्च गन्ध, धनी बबल, कडा र मीठो स्वाद हो
तपाईले चियामा चिया उमालेर चियाको भाँडामा केही मिनेट सम्म राख्न सक्नुहुनेछ वा केही पुदीनाको पात थपेर यसलाई उत्तम स्वाद बनाउन सक्नुहुन्छ।
के तपाईंलाई अल्जेरिया थाहा छ?
डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ अल्जेरिया, वा "अल्जेरिया" छोटोका लागि उत्तरी अफ्रिकाको माघ्रेबमा रहेको एउटा देश हो। यसले उत्तरमा भूमध्यसागर, पूर्वमा लिबिया र ट्युनिसिया, दक्षिण पूर्व र दक्षिणमा नाइजर, माली र मौरिटानिया र पश्चिममा मोरक्कोको सीमाना लगाएको छ। अल्जेरिया अफ्रिका, भूमध्यसागर र अरब देशहरूमा सबैभन्दा ठूलो भूमि क्षेत्र छ, र विश्वमा १० औं स्थानमा छ।
अल्जेरियाको कुल जनसंख्या .2२.२ मिलियन (२०१ 2017) छ। अधिकांश अरबहरू हुन्, पछि बर्बर (कुल जनसंख्याको लगभग २०%)। जातीय अल्पसंख्यकहरू मेजाबु र टुआरेग हुन्। आधिकारिक भाषा अरबी हो, र फ्रेन्च प्रयोग गरिन्छ। इस्लाम राज्य धर्म हो। अल्जेरिया फ्रान्सेली यसको पहिलो विदेशी भाषाको रूपमा सबैभन्दा ठूलो देश हो।
अल्जेरियाको आर्थिक पैमाने अफ्रिकामा चौथो स्थानमा छ। खाना र दैनिक आवश्यकताहरू मुख्यतया आयातमा निर्भर छन्।
इस्लामको अल्जेरियनहरूको जीवित रीतिथितिमा ठूलो प्रभाव छ। परम्परागत अनुष्ठान महिना "रमजान" हरेक वर्ष इस्लामिक क्यालेन्डरको नौौं महिनामा मनाइन्छ।
मुस्लिमहरूले बिहान no, दिउँसो, दिउँसो, साँझ र राती मक्काको दिशामा पाँच पटक प्रार्थना गर्नुपर्दछ। शुक्रवार तिनीहरूको आराधना दिन हो, र यस दिन मानिसहरू सामूहिक पूजाका लागि मस्जिद जाने छन्।
अल्जेरियाले सुँगुर र सुँगुर जस्ता जनावरहरू जस्तै पाण्डाहरू विज्ञापन ढाँचाको रूपमा प्रयोग गर्नुहुन्न।
दक्षिणी अल्जेरियाको केहि क्षेत्रहरूमा मानिसहरूलाई सेतामा विशेष चासो छ। यो भनिन्छ कि सेतो प्रकाश को प्रतिबिम्बित गर्न र तातो जलवायु को अनुकूलन गर्मी बाट बच्न सक्छ। यो पनि किनभने सेतो तिनीहरू शान्तिको प्रतीकको रूपमा मान्दछन्।
अल्जेरियाको उच्च वर्ग फ्रान्सेली बोल्न मन पराउँछ। यदि अतिथिले अरबीमा केही शब्दहरू बोले भने, पाहुना खुशी हुनेछ।
अल्जेरियामा, चिया पाहुनाहरू प्राप्त गर्ने पेय हो, र उनीहरूले हरियो चिया पिउन मनपराउँदछन्। जब तपाइँ अल्जेरियन घरमा आमन्त्रित हुनुहुन्छ, तपाइँले होस्टमा उपहारहरू ल्याउनुपर्नेछ।
अल्जेरियामा चिया आयात
चिया खरीद मात्रा: १,,3०० टन (२०१२ मा, यो चीनको हरियो चिया निर्यातमा तेस्रो स्थानमा छ)
साधारण चिया प्याकेजि:: g 85 ग्राम सैचेट प्याकिंग, १२g ग्राम साचेट प्याकिंग
हरियो चियाका प्रकारहरू: गनपाउडर चिया, चुनमी चिया
साधारण चिया संख्या:5350०5, 10१०२२, 71 71 71१
अघिल्लो: चुनमी 68 686868
अर्को: CTC कालो चिया